Buenavista အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းမှပြီးပြည့်စုံသောအိမ်သူအိမ်သား !!
status အားလုံး status အ ငှားရန် ရောင်းမည်! စျေးနှုန်းလျှော့ချ! Real Estate အိမ်ခြံမြေ ရောင်းချခဲ့
ပုံစံ အားလုံးအိမ်ခြံမြေအမျိုးအစားများ အခန်း အဆောက်အဦး ကိုလိုနီခေတ်အိမ် စီးပွားဖြစ် ကွန်ဒို / Townhome / Row မူလစာမျက်နှာ ကျေးလက်အိမ် duplex Finca ဟော်တယ် အိမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြေယာ Penthouse မွေကှကျ စားသောက်ဆိုင် ဗီလာ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
မြို့ အားလုံးမြို့များ Adeje ဂီ Dulce Alcala Arafo Arguayo Arico Arona Bajamar Buenavista del Norte Buenavista ဂေါက်ကွင်း Candelaria Chayofa Chiguergue Chio ကော်စတာ del Silencio ဖုန်မှုန့်ဂူ လေတိုက်ဂူ အဆိုပါ Jaral အယ်လ် Medano အဆိုပါPorís အယ်လ် Pris အယ်လ် Sauzal အယ်လ် Tanque Fasnia Garachico GENOVÉS Granadilla က de Abona Guia က de Isora Icod Igueste Caldera la Caleta က de Guimar la Caleta က de Interián la Laguna အဆိုပါMontañeta la Orotava ဘုရင်မ ရေကို လာ့စ်ဗီး Caletillas အဆိုပါ Caletitas လာ့စ်ဗီး Eraser လာ့စ်ဗီး Lagunetas လာ့စ်ဗီး Portelas နှင်းဆီပန်း အင်္ကျီ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Cristiano ကုမ္ပဏီကြီးများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Realejos Silo များ မျက်နှာဖုံး Palmar ဘုရင်မကြီးရဲ့ပန်းခြံ Playa de la Arena စန်း Juan သဲသောင်ပြင် Playa Paraiso Playa စန်းမားကို့စ Playa Sibora Puertito က de Guimar Puerto de la Cruz Puerto က de စန်တီယာဂို Punta က de Hidalgo စန်း Andres စန်း Isidro စန်းဟိုစေးက de los Llanos စန်း Juan de la Rambla စန်တာ Ursula Santiago del Teide Sotaviento Tablado Taganana Taja Tamaimo Taucho Tejina က de Isora
အိပ်ရာ အိပ်ရာ 1 1-2 1-3 11224345679
ရေချိုးခန်း ရေချိုးကန် 1 1-2 1-32346
နေအိမ်Buenavista အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းမှပြီးပြည့်စုံသောအိမ်သူအိမ်သား !!
လောတ Size ကို186 m²
ရပ်ကွက်ထဲBuenavista del Norte
608336240 + WhatsApp ကို
ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း, ဗီလာနှင့်မြင်းတည်ငြိမ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ finca
ပထမဦးစွာအရစ်ကျ € 250,000 ။ total price € 975,000
လောတ Size ကို48000 m²
Buenavista ဂေါက်ကွင်းအနီးကျယ်ဝန်းအိမ်သူအိမ်သား + finca!
လောတ Size ကို900 m²
လောတ Size ကို221 m²
Seafront duplex တိုက်ခန်း + ရေကူးကန် + သမုဒ္ဒရာမှဝင်ရောက်ခွင့်!
ရပ်ကွက်ထဲPlaya de la Arena
Playa de la Arena အနီးတိုင်းပြည် villa
Playa de la Arena, Guia က de Isora
လောတ Size ကို20.375 m²
သမုဒ်ဒရာအမြင်များ + ရေကူးကန်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသော PENTHOUSE!
Playa de la Arena, Guia က de Isora, Tenerife
အိမ် Alcala အတွက်သမုဒ္ဒရာကနေ 60 မီတာအထိ !!
Alcala, Guia က de Isora, Tenerife
လောတ Size ကို79 m²
စားသောက်ဆိုင် + အိမျတျောကို + မြေယာ! စုံလင်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း!
အဆိုပါMontañeta, Garachico, Tenerife
လောတ Size ကို4000 m²
အားလုံးကမ်းလှမ်းမှု View →
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး Masca ၏လှပသောကျေးရွာတွင်တည်ရှိသည်။ Google Maps ကိုကိုသြဒိနိတ်:
, Tenerife mask
© 2019 ပေုံTenerife®အိမ်ခြံမြေအေဂျင်စီ, All Rights Reserved ။ နောက်ကျောထိပ်